Mahatsiaro Ireo Sasany Amin’ny Kintan’i Afghanistan, Maty Tamin’ny Fanafihana Tao Amin’ny Anjerimanontolo Fanta-daza Ao Kaboul · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2016 5:12 GMT
Tsy nisy vondrona nilaza ho tomponandraikitra, saingy nilaza ny filoham-pirenena Afghan Ashraf Ghani fa nokotrehana tany Pakistàna ilay fanafihana.
Voafandrika tao anatin'ny iray amin'ireo tranobe tao amin'ny AUAF ireo mpianatra maro sy ireo mpikambana ao amin'ny toeram-pampianarana, anisan'izany ilay nahazo ny lokan'ny fakàna sary Pulitzer, Massoud Hossaini.
Voavonjin'ny polisy Afghana ihany ny sasany tamin'izy ireo, toa an'i Hossani. Taorian'ny ora sivy, tapitra ny fanafihana ary noesorina daholo ireo olona teny amin'ny faritry ny toeram-pianarana.
Namoaka fanambaràna ihany koa ny biraon'ny raharaha ivelany ao #Pak , ary nanameloka ny #AUAFAttack (Fanafihana tao amin'ny Anjerimanontolo Amerikàna). Mpanohana feno ny frampihorohoroana manameloka ny fampihorohoroana ? Tsy mandresy lahatra
Vao avy nahita aho hoe 1 tamin'ireo novonoina ny alina lasa teo tamin'ny fanafihana tao #AUAF ny namako be Jamshid. Tena tohina aho.
Tamin'ny fizaràna ilay vaovao mahatsiravina, nibitsika izao i Omaid Sharifi, rahavavin'i Alina sady anisan'ny mpanorina ny hetsika kanto an-dalambe Art Lords:
Ny rahavaviko, Alina, 18 taona, vao nanjohy ny #AUAF ; mbola any #Pakistan ny dadany amin'izao mba hàka ireo naotiny. Novonoin'ireo #SoldiersOfEvil (Tafiky Ny Helo) izy
Namoy ny profesoranay Naqib Ahmad Khpulwak izahay ao amin'ny toeram-pianarana #AUAF, mpianatra nivoaka avy tao amin'ny sekolin'ny lalànan'i @Stanford. Namana izy.😢
Maneho ny fiarahamiorinay amin'ireo fianakaviana sy naman'ilay #Fulbright teo aloha Naqib Khpulwak sy ireo hafa maty tamin'ny fanafihanany #AUAF
Mpianatra tao amin'ny #AUAF i Walid. Handry am-piadanana anie ny fanahiny. #AUAFAttack
Afghanistan aho.”#AUAF #AFG
Hita ho toy ny fanafihana atao amin'i Afghanistan amin'ny hoavy ilay fanafihana vao haingana natao nanjo ny AUAF. Hatramin'ny nanorenana azy ny taona 2004, nahazo vatsim-pianarana tsara ireo mpianatry AUAF teo aloha, tafiditra amin'izany ny vatsim-pianarana Fulbright, Chevening ary DAAD, izay nanome fahafahana azy ireo hahazo fahalalana ilaina entina hanorenana sy hampandrosoana ny firenena.